Depiote 73 : Nifanaretsaka nanatitra CV -
AccueilSongandinaDepiote 73 : Nifanaretsaka nanatitra CV
Tojo amin’ny tanjona iriana izao ny solombavambahoaka 73, izay mpitanin’andro etsy amin’ ny parvis Analakely amin’izao fotoana izao, tsy inona izany fa ny seza izay efa nandrandraina efa ela. Omaly maraina mantsy dia nifanaretsaka samy nanatitra CV avokoa ireo solombavambahoaka izay maniry ny ho minisitra. Rehefa nanontaniana moa izy ireo dia samy nilaza fa mbola tsy haneho hevitra aloha, satria mbola hisy ny fivoriana izay hiarahan’ny antokony avy. Ankilany kosa dia tazana teny an-tanan’ny tsirairay avy ny taratasy misy ny mombamomba azy ireo sy ny mari-pahaizany, ka samy mbola sahirana tamin’ izany avy ireo eo anivon’ny solombavambahoaka 73. Vokatr’izay dia nihanjahanja tsy tahaka ny isan’andro ny tetsy amin’ny kianja fitanian’andro, satria ireo mpitarika dia mbola mikatsaka ny soa ho azy ireo tsirairay avy, dia ny seza hitombenana izany. Anisan’ny lohalaharana tamin’ireo izay nanatitra ny CV ireo izay tena mitarika ny hetsika tahaka ny maitre Hanitra Razafimanantsoa izany, teo ihany koa ireo izay nieritreritra ho praiministra, saingy gina taty amin’ ny ora farany noho ny fandinganan’ny lehiben’ny antoko azy ireo tamin’ny fanolorana ny anaran’i Ntsay Christian, dia teo ny depioten’Ikongo Razafintsiandraofa Brunel sy ry Christine Razanamahasoa.
Azo lazaina fa maizina am-pototry ny mazava ireo mpanara-dia ny hetsiky ny solombavambahoaka 73 etsy Analakely, satria dia tratran’izy ireo ny tanjona amin’ ny fampiasana ireo olona ireo dia ny fakana seza izany. Ireo vahoaka mpanaraka ireo solombavambahoaka izay tena voafitaky tokoa tamin’ny fampandriana adrisa, ary azo lazaina hoe tena fitaovana nandritra ny hetsika. Ireo vahoaka tokoa izay tsy nahatakatra firy ny tian’ ireo solombavambahoaka hotanterahina, satria efa hatrany am-boalohany no niovaova ny fototra sy ny tanjon’ ny tolona, ka tokony efa nahatonga saina ny rehetra. Raha tsiahivina tokoa mantsy ny fitakiana dia efa hatrany am-boalohany no nisy ny fiovaovana ka mahakasika ny tsy fanekena ny lalàm-pifidianana no anton’ ny hetsika tany ampanombohana, niova indray izany ka ny fitakiana faharoa dia ny fialan’ny Filoham-pirenena, taorian’ izay indray dia ny hoe ny MAPAR no maro an’isa, ary takiana ho izy ireo no hivoahan’ny praiminisitra, fitakiana farany kosa nanomboka omaly indray dia ny hoe fifidianana ihany no ahafahan’ ny firenena mivoaka amin’ny olana misy. Noho izany dia anjaran’ny tsirairay no mijery ny fomba fanao eto amin’ ny tany sy ny firenena sy izay olona mendrika, ary izany fomba fijery izany dia tokony hiainga amin’ny fitiavan-tanindrazana.